सवारी चालकलाइ मापसे सँगै अब ‘ लापसे ‘ जाँच पनि सुरु – ThikThak News
अहिले सम्म प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन ( मापसे ) जाच गर्दै आएको थियो। प्रहरी गरेको मापसे अभियान सफल भएको थियो। मादक पदार्थ सेवन गरि चलाउनेक लागि थालिएको कारबाही अभियान ‘हिट’ पनि भयो । धेरै सवारी चालकहरु प्रहरीको फन्दामा परेर कारबाही समेत भएको छ। मापसे पूर्ण रुपमा सफल भएपछी प्रहरी अब अर्को अभियान लापसे पनि सुरु गरेको छ। लापसे अर्थात् लागुपदार्थ सेवन सेवनको जाच पनि सवारी चलाउने माथि सुरु भएको हो ।
प्रदेश २ प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) का साथै लागुपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाए नचलाएको जाँच गर्न थालेको हो । चालक हरुले मादक पदार्थ सँगै लागुऔषध समेत प्रयोग गरि सवारी चलाउने क्रम बढेपछि यो अभियान सुरु भएको हो। बारा र सप्तरीका केही सवारी चालकमा लापसे जाँच गरिएको हो। बारामा ५३ जना र सप्तरीमा १० जना सवारी चालक माथि जाच गर्दा २ जनाले लागुऔषध गाँजा प्रयोग गरेको फेला परेको थियो। लापसे गर्नेलाई दिनभर नियन्त्रणमा राखी जरिवाना तिराएर सचेत गराएर छोडिएको थियो।
लापसे को जाँचका गर्न सवारी चालकलाई एउटा सानो डिब्बा दिँदै पिसाब भर्ना लगाइएको थियो। नार्काेनन नामक संस्थाबाट उपलब्ध ड्रग यूरिन टेस्ट किट प्रयोग गरि लापसे गरे नगरेको जाच गरेको थियो। पिसाबमा टेस्ट किट प्रयोग गरेपछि तत्कालै देखाउँछ। साथै कुन लागु औषध प्रयोग समेत गरेको हो भन्ने समेत देखाउछ। दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यो अभियानको सुरु गरिएको बताइएको छ । लापसे जाँच गर्ने थप किट उपलब्ध गराइएपछि ८ वटै जिल्लामा जाँच सुरु हुने बताइएको छ।
धुर्मुसलाई क्रीकेट स्टेडियम निर्माणमा कप्तान पारस खड्काले पुरा साथ दिने
मलेसियामा जथाभावी थुन्ने र यातना दिने: ३ जनालाई नेपालीलाई मृत्युदण्डको फैसला
देश कृषि प्रधान भनिरहने, खेत बाझो राखेर दाल चामल विदेशबाट मगाइरहने ?
Previous Article तपाइको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस आज मंगलबारको राशिफल
Next Article क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेले आईपीएलबाट फर्किए लगत्तै किने महँगो बाइक